Sina: Misy toerana ho an’ny kolontsaina avo lenta ve eo anivon’ny fanabeazana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2010 19:51 GMT
Misy toerana ho an’ny fanabeazana ankapobeny ve amin’izao fiaraha-monina maoderina ankehitriny izao, izay efa maharomotra ny fifaninanana eo amin’ny tsenan’ny asa, ary ny raharaha rehetra dia samy efa voatokana sy ara-teknika daholo?
Ny volana Aprily dia namoaka taratasy nosoratan’ny mpianatra amin’ny taona faha-3 amin’ny Anjerimanontolo ao Tianjin, tanan-dehibe malaza iray ao amin’ny faritra avaratra-atsinanan’i Chine ny vaovao avy amin’ny Southern Metropolitan Weekend :
我们学校有许多日本留学生。一次偶然的机会,看到他们的课表,课程有书法、京剧、太极…… 我好羡慕他们,因为我从小到大都没有机会接触这些———小学没有条件,初中没有精力,高中没有心思———到大学什么都有了,但学校把机会都给了留学生。万 一有天跟日本友人谈论京剧,也许他懂得比我还多呢!
Tsy takatro hoe inona no votoatin'ny kolontsaina Sinoa.
Ao amin'ny sekoly misy ahy, misy mpianatra Japoney maro avy any ampitan-dranomasina. Tamin'ny kisendrasendra ihany, nitopy tany amin'ny fandaharam-potoanan-dry zareo ny masoko, izay misy Sora-kaliana, Opera avy any Pekin, Tai Chi…… Mitsiriritra an-dry zareo aho. Mitsiriritra an-dry zareo aho satria hatramin'ny fahazazana ka mandrak'androany dia tsy mba nanam-bitana nianatra ireny zavatra ireny aho – Tsy nanana ny ho enti-manana azy aho tany amin'ny ambaratonga voalohany; tsy nanana ny hery sy tanjaka indray tao amin'ny ambaratonga faharoa; ary tsy taitra taminy intsony nony tonga tamin'ny sekoly ambony. Amin'izao fotoana, misy ny zavatra rehetra aty amin'ny Anjerimanontolo, saingy omen'ny toeram-pianarana vahana amin'ireny rehetra ireny ireo mpianatra avy any ivelany. Indray andro any, raha miresaka amina Japoney iray momba ny Opera avy any Pekin aho, angamba izy no hahafantatra bebe kokoa noho izaho!
Opera avy any Pekin
Xiong Bingqi, mamaly ity taratasy ity ao amin'ny blaoginy, dia nandinika lalina ireo antony mahatonga ny fahabangana eo amin'ny mpianatra Sinoa tsy ahafahan-dry zareo mianatra momba ny Kolontsaina Sinoa:
是大学的责任？也许看完这封短信，大家的第一反应是大学有些崇洋媚外，不给学生开书法、京剧和太极。实际情况并非如此。据 我所知，一些大学早几年就开设了这样的选修课，以及相关的社团，可是选择这些课的学生相当之少——少得不能正常开班；社团活动也苦苦支撑——每次活动的 “票友”极少，连举办者也灰心丧气。
Andraikitry ny Anjerimanontolo ve izany? Rehefa avy mamaky ity taratasy fohy ity, angamba ny fahatsapanao voalohany dia ny hoe mitodika loatra amin'ireo mpianatra vahiny ny Anjerimanontolo noho izy tsy manome fampianarana Sora-kaliana, Opera avy any Pekin sy Tai Chi ho an'ny mpianatra teratany. Nefa lavitra loatra ny tena fahamarinana izany. Ny marina, maromaro ireo anjerimanontolo no nanomboka fampianarana sy fanakambanana natao ho an'ny mpianatra toy izany mba hahafahana misafidy. Na izany aza, tena vitsy amin'ireo mpianatra teratany no misafidy azy ireny. Tsy dia mahasarika ny maro loatra koa ny hetsika ara-kolontsaina, izay tena mahaketraka ireo mpikarakara.
在今天的大学，在就业的压力下，无论是学校还是学生，都更关注技能教育，通识教育已被冷落——从功利、职业角度看，教育确 有双重功能，一方面是功利的、职业化的、技能化的教育，此即技能教育；另一方面则是非功利的、非职业化的、非技能化的教育，此即通识教育。技能教育可以帮 助受教育者掌握职业所需知识和技能，而通识教育却能提高一个人的素质以及发展潜能。一般而言，作为大学，应该重在培养学生的基本能力与素质，作为高职高 专，则强调学生的就业技能培养。
Anatin'ny tontolo misy ankehitrio, ireo mpianatra sy ireo sekoly dia samy miompana amin'ny fampianarana ara-teknika daholo noho ny faneren'ny tsenan'asa. Ary dia toa nilaozan'ny toetr'andro ny fampianarana ankapobeny. Tanjona roa no tratrarin'ny fanabeazana. Raha amin'ny fomba fijery azy ho fitaovana, dia miantoka ny fampitaovana izy, ny ara-teknika ary ny asa fivelomana. Raha amin'ny fijery tsy mandray azy ho fitaovana, dia tena ny mifanohitra amin'izay tanteraka, ary io ilay antsointsika hoe fanabezana ankapobeny. Ny fanabeazana ara-teknika iray dia afaka manampy ny mpianatra hahafehy ny fahaiza-manao ara-teknika ilaina amina asa iray, raha ny fanabeazana ankapobeny kosa manandratra ny toetra sy ny lanjam-pahaizan'ilay mpianatra. Amin'ny ankapobeny, ny anjerimanontolo iray dia tokony hifantoka amin'ny fampivoarana ny lanjam-pahaizana sy ny toetry ny mpianatra, raha ireo sekoly fiofanana manokana indray dia tokony hanindry mafy ny fahaiza-manao ilay asa.
Saiky ny ankabeazan’ireo anjerimanontolo no iharan’ny tsindry amin'ny fanatratrarana ny tanjona takian'ny tsenan'ny asa amin”ireo mpianatra vao nahazo diplaoma. Vokany, mirona be any amin'ny taranja ara-teknika ny fampianarana. Voasongon’ny ny fampianarana ara-tekinika ny fampianarana ankapobeny. Indrisy fa izany no nanjary antsoina hoe «fanavaozana»[…] Tsy sarotra noho izany ny manakatra ny antony mahatonga ireo lesona momba ny kolontsaina ho mora kokoa ho an'ireo mpianatra vahiny noho ireo mpianatra teratany. Tsy manana tsindry momba ny tsenan'asa ho an'ireo mpianatra vahiny ireo Anjerimanontolo. Noho izany dia afaka mirona any amin'ny kolontsaina sinoa izy ireo, izay tanjona lehiben'ny fianarana any ivelany.
Saingy tsy vaovao io fahapotehana ateraky ny fandratoam-pahalalana eo amin’ ny kolontsaina io, ary tsy voafetra ho any Sina ihany. Christopher Lasch mpitsikera sy mpahay tantara momba ny fiarahamonina Amerikana, dia mamely ny fiharatsian'ny kolontsaina tandrefana amin'ny kapitalisman'ny andro mivoatra. Mitsikera ny fiharatsian'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra any Amerika, nanoratra tao amin’ny The Culture of Narcissism izy tamin'ny 1979:
Potika ny lasitra, eny fa na dia any Harvard, Yale, sy Princeton aza, izay sarotsarotra ny manoritra azy ho fampianarana ho an'ny rehetra. Nitatitra ny vondrom-piarahamonin'ny fakiolte [faculty] iray ao Harvard fa “tsy miraharaha ny fampianarana ny fakiolten’i Harvard”. Araka ny fanadihadiana natao momba ny fampianarana ankapobeny any Columbia, nanary ny “fahatsapana sy famantarana ny karazana tsy fahalalana tsy azo ekena” ireo mpampianatra. Vokatr'izany dia “ireo mpianatra namaky ny famaritan'i Rabelais ny fikorontanan’ny olon-tsotra no nampifandray azy tamin’ny “Revolisiona” frantsay. Kilasy iray misy mpianatra 25 no tsy mbola naheno mihitsy momba ny “complexe d’Oedipe”, na momba an'i Oedipe. Mpianatra iray ao anaty kilasy ahitàna ankizy 15 irery no afaka manome ny datin’ny revolisona russe folo taona aty aoriana”
Araka izay novakiana teo, misy fomba fisaina manaitra mitovy amin'izany izay azo ampiharina amin’ny zava-misy ankehitriny any Sina:
Na ahoana na ahoana, tsy azo atsipy any amin'ny tsy fahombiazan'ny rafi-pampianarana ny fihenan-danjan’ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra. Amin’ny fiaraha-monina maoderina, ny sekoly dia natao hanomanana ny olona hiasa fotsiny, nefa ny ankamaroan’ny asa misy, na dia ireo manana ny laharana ambony eo amin’ny ara-toekarena aza, dia tsy ilàna fahaiza-manao na tekinika akory. Noho izany, ny ankabeazan’ireo asa dia fahazàrana fotsiny sisa, tsy dia miankina loatra amin’ny orinasa sy ny kiry ataon’ireo mpiasa nianatra ka lasa ‘mahay tafahoatra lavitra’ ny asa izay misy izy. Ny fahapotehan'ny rafi-pampianarana dia hita taratra eo amin’ny fidinan-danjan’ny fiarahamonina eo amin’ny lafiny fanapahan-kevitra, fandraisana anjara, sy ny zotom-po hanatontosa.
Eto, mazava ho azy, ny “fandavan-tena, fandraisana anjara, ary ny zotom-po hanatontosa” dia mahakasika ny kolontsaina avo lenta. Saingy ny fiarahamonin’ny asa maoderina tsy misy toerana ho an’ io fomba fisainana io. Izany no mahatonga antsika haka sary antsaina ny taranja kolontsaina, ny filozofia, ny tantara sy ny taranja hafa miresaka ny maha-olombelona ho tsy dia manan-danja eny amin’ny fampianarana ambony. Fa ny fanohizan-tsika io hazakazaka io hatramin’ny farany, misy lalan-kivoahana ve ? Mbola manana ny toerany ao anaty fiarahamonina ve ny kolontsaina avo lenta ankehitriny?
Misy toerana ho an’ny fanalalahana fampianarana ve amin’izao fiaraha-monina maoderina ankehitriny izao, izay efa maharomotra ny fifaninanana eo amin’ny tsenan’ny asa, izay efa miha-mivoatra sy ara-teknika.